Fametrahana ny mangarahara: 6 000 ireo mpanara-maso fifidianana avy amin’ny Safidy | NewsMada
Fametrahana ny mangarahara: 6 000 ireo mpanara-maso fifidianana avy amin’ny Safidy
Efa vonona. Hahatratra 6 050 ireo mpanara-maso fifidianana avy amin’ny ivontoerana Sampana hanaraha-maso ny fifidianana, ivon’ny demokrasia ifarimbonana (Safidy) hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena, ny 7 novambra ho avy izao.
“Hitondra ny anjara birikiny izy ireo hahatongavana amin’ny fifidianana mangarahara, eken’ny rehetra ary ao anaty filaminana”, hoy ny tompon’andraikitra, Rakotobe Heriniaina, tetsy Ambatonakanga, omaly. Hiasa amin’ny distrika 34 amin’ny faritra Amoron’i Mania, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Sava, Atsimo Andrefana ary Androy izy ireo.
Notsiahiviny fa fitaovana iray lehibe ahafahana manara-maso ny fizotry ny fifidianana, manao fanadihadiana sy fitsirihana ny tsy ara-dalàna sy ho fisorohana ny fomba mamohehitra manodididna ny fifidianana ny Safidy. “Ilaina ny fandraisana andraikitra, fifanomezan-tanana sy ny firotsahana mivantana ataontsika mpikambana amin’ny firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena amin’ny dingana rehetra ny fifidianana », hoy ihany izy.
Manara-maso ny fampanantenana tamin’ny fampielezan-kevitra
Anisan’ny asan’izy ireo ny fanaraha-maso ny dingam-pifidianan rehetra, manomboka amin’ny fametrahana ny lalàm-pifidianana, ny famolavolana ny lisi-pifidianana, ny fotoan’ny fampielezan-kevitra, ny fotoam-pifidianana hanaovana ny latsa-bato, ny fikirakirana sy ny famoahana ny voka-pifidianana ary ny toe-draharaham-pirenena aorian’ny famoahana ny vokatra. Tsy mijanona eo anefa izany. « Manara-maso ny fanatanterahan’ny olom-boafidy : filoham-pirenena, depiote, ben’ny Tanàna ny fampanantenana nataony nandritra ny fampielezan-kevitra”, hoy ihany ny Safidy.
Tsiahivina fa hahazo fampitaovana sy fanamafisana traikefa mifanaraka amin’ny asa fanaraha-maso ireo 6 050 mpikambana amin’ny firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena hirotsaka hanara-maso fifidianana ireo. Mamatsy vola izany kosa hy eo anivon’ny Vondrona eoropeanina.